Ahoana ny fomba hanatsarana ny Debian, Ubuntu, Linux Mint ary ny derivatives amin'ny Stacer | Avy amin'ny Linux
Manatsara, manadio ary maka sary an-tsaina ny fahombiazana sy ny fampiasantsika ny fitaovantsika, dia iray amin'ireo lahasa izay ataontsika rehetra tsy tapaka, ireo izay maniry ny hampiasa interface graphique ary hametraka ny console hanatanterahana ity asa ity, manana safidy hafa ianao, iray amin'izany ny Stacer.
Hianaranao ato amin'ity lahatsoratra ity ny fomba Ahoana ny fomba hanatsarana ny Debian, Ubuntu, Linux Mint ary ny derivatives, Amin'ny fomba haingana sy haingana, dia hofehezinao ihany koa ireo rindranasa manomboka amin'ny système d'exploitation, ary afaka mifidy izay rindranasa tianao hotohizana hametrahana ianao.
1 Inona no atao hoe Stacer?
2 Endri-javatra Stacer
2.1 Pikantsary stacer
2.1.3 Fanadio ny rafitra
2.1.4 Apps fanombohana
3 Ahoana ny fametrahana Stacer?
3.1 Ampidiro Stacer amin'ny Debian Linux x86 sy ny derivatives
3.2 Ampidiro Stacer amin'ny Debian Linux x64 sy ny derivatives
3.3 Esory ny Stacer
Inona no atao hoe Stacer?
Stacer dia fitaovana open source tsotra, nataon'i Oguzhan Inan, izay ahafahantsika mijery ireo toetoetran'ny fitaovantsika, manatsara sy manadio ny fizarana anay, mandamina ary manamarina ireo serivisy sy programa izay mandeha, ary koa manana ny fahaizana mamafa ireo fonosana izay tondroinay.
Stacer Izy io dia manana interface somary tsotra, voalamina ary manintona, atolotra ho an'ireo mpampiasa vao manomboka sy ireo izay te-hanao dingana izay matetika ataontsika avy amin'ny console avy amina interface interface tsara.
Fitaovana maimaimpoana sy maimaim-poana io.
Interface tsara intuitive sy manintona.
Avelao ny fidirana sudo.
Izy io dia manana Dashboard izay manondro ny fampiasana ny CPU, Memory, Disk ary ny fampahalalana ankapobeny momba ny fitaovantsika sy ny rafitra fiasanay.
Azo atao ny manara-maso sy manadio rakitra avy amin'ny Apt Caché, Crash Reports, System Logs, App Caché.
Io dia ahafahanao misafidy izay rindranasa sy serivisy tokony harahina rehefa manomboka ny rafitra fikirakiranao.
Manome antsika ny fiasa hampiasana sy hanafoanana serivisy haingana sy mora izany.
Fitaovana uninstaller fonosana iray tsindry faran'izay tsara.
Fanadio ny rafitra
Ahoana ny fametrahana Stacer?
Ampidiro Stacer amin'ny Debian Linux x86 sy ny derivatives
Download stacer_1.0.0_i386.deb avy amin'ny Navoaka i Stacer pejy. Hamarino fa mametraka ny kinova farany ianao
Run sudo dpkg --install stacer_1.0.0_i386.deb ao amin'ny lahatahiry izay nandefasanao ilay fonosana.
Mandehana any amin'ny lahatahiry cd/usr/share/stacer/ ary mihazakazaka ./Stacer
Ampidiro Stacer amin'ny Debian Linux x64 sy ny derivatives
Download stacer_1.0.0_amd64.deb avy amin'ny Navoaka i Stacer pejy. Hamarino fa mametraka ny kinova farany ianao.
Run sudo dpkg --install stacer_1.0.0_amd64.deb ao amin'ny lahatahiry izay nandefasanao ilay fonosana.
Raha te hampiditra ilay rindranasa ao anaty menio fizarana ianao dia tsy maintsy mamorona rakitra .desktopen /home/$USER/.local/share/applications mametraka ity manaraka ity (ovao ny lahatahiry ho an'ilay mifanitsy):
Esory ny Stacer
Stacer Izy io dia fitaovana azo ampiharina, mora apetraka, miaraka amina interface intuitive ary misy endri-javatra maro izay tiantsika hampiasaina amin'ny fotoana iray. Antenainay fa hitanao fa mahasoa azy io ary miandry ny hevitrao sy ny fiatraikany izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Ahoana ny fomba hanatsarana ny Debian, Ubuntu, Linux Mint ary ny derivatives amin'ny Stacer
Heveriko fa manana ny "fomba" isika. Ankoatry ny torolàlana fametrahana / esory dia be ny pikantsary fa ny atiny kely momba ny hetsika tokony hatao, toy ny serivisy inona no tsy hampandeha azy amin'ny fananganana orinasa mba "hanatsara" ny rafitra.
Mamela lahatsoratra bilaogy vitsivitsy aminao izay afaka manampy anao bebe kokoa aho
Toy izany koa raha mandeha amin'ny rohy manaraka ianao https://blog.desdelinux.net/?s=optimizar hahazo fampahalalana marobe momba izany ianao. Manome anao ny fahafaha-manao dingana maromaro amin'ny alàlan'ny sary ilay fitaovana
Yukiteru amano dia hoy izy:
Miarahaba anao, manome anao torohevitra kely aho:
Aza atao mamorona lahatsoratra amin'ny atiny manjavozavo sy tsy manampy toy izany. Lahatsoratra an-tapitrisany amin'ity karazana ity no efa misy, ary satria Linux ny tranokala fanovozan-kevitra ho an'ny mpampiasa Linux maro dia maro ny fitaovana ato amin'ity pejy ity azo ampiasaina ho an'ity, tsara kokoa ho anao ny manome azy ireo ao anaty lisitra haingana noho ny hamerenany ny kodiarana.
avy amin'i @Yukiteru
Valiny tamin'i Yukiteru Amano
Mahalana vao heverinao ho tsy dia ilaina loatra izany, rehefa olona maro no nanomboka nampiasa azy io satria manamora kokoa sy mahazo aina kokoa azy ireo ny manana klioba hanao zavatra sasany ao amin'ny terminal. Misaotra betsaka amin'ny torohevitrao, na dia tsy mamerina ny kodiarana aza izahay, dia mamoaka fitaovana mamela anao hanao hetsika sasantsasany amin'ny Linux ihany.
Efa misy ireo lisitra, ankehitriny izahay dia manampy sy mampahafantatra fitaovana vaovao.
Nandany ny fotoanako aho, tsy misy zavatra tsy vitan'ny tanana amin'ny fahalalana antonony
Izy io dia zavatra azo tanterahina amin'ny tanana tsotra, ataoko mazava tsara amin'ny fampidirana ny lahatsoratra
Stacer dia manana interface tsotra, voalamina ary manintona, atolotra ho an'ireo mpampiasa vao manomboka sy ireo izay te-hanao dingana izay matetika ataontsika avy amin'ny console avy amina interface interface tsara.
Ilay "marani-tsaina" mahazatra izay mirehareha amin'ny fahalalana be satria mianatra baiko be dia be ianao rehefa afaka misafidy ny hanao ny zavatra rehetra amin'ny fomba tsotra kokoa. Azonao atao ny mahita izany ho an'ny sasany, ny computing dia tsy maintsy mijanona ho toy ny tamin'ny taona 80.
Misaotra an'i Stacer ity, tena azo ampiharina ho antsika izay tsy manam-potoana hianarana baiko sy tantara ary aleony mampiasa ny fotoanantsika amin'ny zavatra hafa.
Ankasitrahana ny vaovao!.
Misaotra betsaka anao nandao ny fahatsapanao.
Salama, fitaovana mahatalanjona, eny, ahoana no ataon'ireo tovolahy marani-tsaina mamaly ny asanao ireo nefa tsy mandray anjara mihitsy? Hoy aho, fitaovana lehibe sy lahatsoratra tsara.
Ara-dalàna izany, an'arivony, fa toy ny zavatra rehetra amin'ny fiainana, ny zavatra tsy maintsy atao ho an'ireo izay manome lanja azy ireo, ny ambiny dia tsy maintsy misy zavatra manan-danja, izay mandany fotoana hitsikerana antsika.
Noacefalta dia hoy izy:
Ao amin'ny Linux dia tsy misy ilaina an'izany, tsy mila manatsara zavatra ianao, na manadio na inona na inona, na avy amin'ny console na amin'ny interface interface, Linux dia handeha foana ihany koa.
Mamaly an'i Noacefalta
Ao am-po tsara ny anao, tsy azo iadian-kevitra izany, saingy indrisy fa tsy misy OS afaka amin'ny "ota", na dia tsy maintsy fantatsika aza ny OS tianao indrindra amin'ny fahasalamana tsara ananany sy ny fitsaboana kely ilainy.
Misy sokajy olona roa, ireo izay manandrana amin'ny fomba iray na amin'ny fomba hafa hanampiana ny hafa, ary ireo izay mitsikera hatrany ny voalohany. Tsy mpampianatra linux daholo isika. Ho antsika izay manomboka eto amin'ity izao tontolo izao ity dia ity no vaovao tiana ho re hatrany, hoy ny teny filamatra ubutnu, "linux ho an'ny olombelona." Ankasitrahana ny fampahalalana
Mamaly an'i robert
Misaotra betsaka, antenaiko fa ho karazan'olona manampy foana ny hafa 🙂
Lahatsoratra tsara, izaho dia iray amin'ireo izay aleoko tsy mampiasa console, na dia hitako aza fa mahasoa izy io, aleoko ny interface graphique ary tsy fantatro ireo fitaovana ireo.
Ny fahaiza-manao omen'ny console antsika dia tena zava-dehibe, fa tsy misy miafina amin'ny hoe misy mpampiasa marobe izay tia manao zavatra amin'ny sary sy amin'ny fomba tsotra kokoa, io vondron'olona io dia misolo tena ny mpampiasa% maro. Desktop Operations ary tokony hahatratra azy ireo tsara kokoa isika.
Sitrana mora dia hoy izy:
Lahatsoratra tsara. Ny fitaovana fanatsarana dia tena tsara. Hitsapa azy amin'ny Linux Mint aho.
Valio ny sitrana mora
Notsapaiko tamin'ny Linux MInt
hernando dia hoy izy:
Tsikaritro ny fitoviana amin'ny tweak ubabit na bleachbit.
Mamaly an'i hernando
Eny, angamba tsy mitovy ny fampiasa amin'ny tranga sasany ... tiako ny interface tsara an'i Stacer
VivaGUI dia hoy izy:
Ankasitrahako ireo programa GUI ireo sy ireo izay mitondra izany amintsika. Ary miankina amin'ny sahan'ireo mavesatra ao amin'ny consolita aho izay manahirana ny famoahana ireo programa miaraka amin'ny GUI. Hey, raha tsy tianao izy ireo dia aza ampiasaina ary aza manelingelina.
Valio amin'i VivaGUI
Misaotra betsaka amin'ny hevitrao, LInux dia ho an'ny tsiro sy ny loko rehetra.
Andao hojerentsika rehefa mahita ireo afomanga manohitra ny GUI ireo ary mamela antsika irery miaraka amin'ny "tsiro sy ny lokontsika." Mitondra tena toy ny hoe nisy nanery azy ireo hitafy azy ireo!
Tsara ny tolakandro, nanandrana nametraka azy tao amin'ny Ubuntu 16.04 aho fa toa tsy izany, nataoko avy amin'ny console ary koa avy amin'ny foibe rindrambaiko, saingy tsy mandeha izy:
Miomana hamaha ny stacer_1.0.0_amd64.deb…
Mamaha ny stacer (1.0.0-1) mihoatra ny (1.0.0-1) ...
Fametrahana stacer (1.0.0-1) ...
Fikirakirana fanodinana bamfdaemon (0.5.3 ~ bzr0 + 16.04.20160824-0ubuntu1) ...
Ny fanodinana triggers ho an'ny menus gnome (3.13.3-6ubuntu3.1) ...
Ny fanodinana dia mitarika ho an'ny desktop-file-utils (0.22-1ubuntu5) ...
Ny fanodinana dia mitarika ho an'ny mime-support (3.59ubuntu1) ...
stacer: baiko tsy hita
Mandehana any amin'ny lahatahiry cd / usr / share / stacer / ary mihazakazaha ./Stacer ... Na soraty fotsiny ity manaraka ity avy amin'ny terminal /usr/share/stacer/./Stacer
Raha ny ahy dia tsy miseho ny folder / usr / share / stacer, notadiaviko tanana ihany koa izy tamin'ny nemo ary tsy nisy.
Salama @ HO2Gi azonao atao ve ny milaza amiko izay fizarana sy kinova apetrakao hizaha raha azoko atao ny maka tahaka ilay scenario ..
Luigys: Misaotra nitondra hazavana kely hanatsarana ny rafitra fiasanay.
Tsaroako izao ny fehezanteny iray avy amin'ny Apôstôly José Martí, izay milaza bebe kokoa na kely aza:
«Ny Masoandro, mpanjakantsika kintana, misy teboka. Tsy tonga lafatra. Ireo feno fankasitrahana dia mahita ny mazava. Ny tsy mahay mankasitraka dia mahita ny tasy fotsiny.
Ary jereo ny fahasarotan'ny fahitana ireo pentina amin'ny masoandro raha mijery azy eo aloha ianao!
Ahoana ny fomba ilazan'ny andian-teny iray hoe:
"Avelao ny ZAZO hiantso an'i Sancho namana, famantarana izany fa mandalo isika."
Salama. Nosintomiko izy io fa nametraka azy io niaraka tamin'ny installer izay tonga ho an'ny fonosana DEB, tsara daholo, saingy te hitantana azy aho ary mahazo hadisoana
Avelako ho anao ny sary, misaotra anao mialoha aho noho ny fanampiana
Mihazakazaha avy eo amin'ny console amin'ny fomba manaraka ary lazao ahy ny fandehany:
Tsy maintsy misy ny tsy mety amin'ny hitsin-dàlana. Azonao atao ny manandrana mamorona vaovao avy amin'ny tonian-dahatsoratra misy anao. Raha te hanao izany ianao dia ity ny kaody:
Anarana = Stacer
Vato = stacer
Ao amin'ny saha "Icon" dia azonao atao ny manondro lalana mankamin'ny kisary hafa tianao (ohatra /home/jesus/cepillo.png).
Zavatra iray hafa: hadinoko fa tsy maintsy tahirinao ny fisie amin'ny extension .desktop raha vantany vao vitao ny fanovana azy.
saulvs dia hoy izy:
Misaotra noho ny vaovao, izay fanampiana ho an'ireo mpampiasa fototra dia ankasitrahana tsara, arahaba
Valio amin'i saulvs
Milaza amiko izany fa misy fiankinan-doha tsy azo tanterahina ka nanandrana nanala azy aho saingy oh gaga fa hitako izy ary nosokafako ary azo ampiasaina ... tsy haiko na ara-dalàna ny hafatra sa ahoana. Mampiasa Xubuntu 16.04 aho.
Fiarahabana sy fisaorana noho ny hatsaram-panahy tamintsika izay vaovao amin'ny GNU / Linux hanamorana ny fiainana ho antsika (satria tena misalasala aho mandany fotoana betsaka amin'ny GNU / Linux mba ho lasa manam-pahaizana manokana momba azy). Hitako fa liana amin'ny mpiserasera Linux ny Windows manao ampihimamba ny tsenan'ny pc, fa ny fihetsiky ny mpitsikera anao dia ny tsy famelana olon-kafa hiditra ... tsy mifanaraka izany.
Salama! Tena mahaliana!
Te hahafantatra aho raha miasa ho an'ny Ubuntu sy ny derivatives na koa ho an'ny fizarana hafa ity fampiharana ity.